Aadaa – Page 22 – Bilisummaa
Guyyaa har’aa wayta Oromoon Finfinneetti of mul’isu ilmaan Oromoo Dirre Dhawaatti ilmaan Nafxenyaatiin tumamaa oolan.
Ergmatuun sirna nafxanyaa haaraya akkatti ummatarraa alaabaa guurti
Ibsaa baanki Raammis
Takkittii akka kumaa gara biyyaa galte
“Toophiyaa Hundaan gammachiisaa jattee saba kee hin dabarsin”
OSFNA Closing Night Party
Yereefii bakka keessa baruuf suura gad qabaa!!
Bilisummaan ni arkata abbaan kha’ee falmmatu
Alaabaa nagayaa ipsituu biyyayyuu Jaalataan khee haa carraaqu guyyuu Kha’e gallaanni toowarraa laga hunddaa danqaree Nyamnyamiifi jawwisaan mooji garaani goree Dhiqee bareeche kharaa warri hamaan …
On Saturday, June1, 2013 Oromos in Winnipeg, Manitoba participated on 10Kr un for their hero Jaaraa Abbaa Gadaa. This is a yearly event Organized by …
Dr. Sheekh Mahammad Rashaad (Sheekha Yoomiyyuu hin irraanfatamne)
Wanni sabni ittiin beekkamu keessa tokko afaani. Kana hubachuun, diinni afaan Oromoo dhabamsiisuuf ijibbata gudda godhe. Ijibbaanni diinni godhaa ture, arra namatti mul’achuullee baatu yaroo …
Bilisummaa Bilisummaa Bilisummaa
Wabii jireenyaa gati namoomaa Bilisummaa ifttu ifttu ipsituu biyyayyuu Jaalatan khee haa carraaqu guyyuu Xurree sitti deemttu tarree irra dhaabbanna Kutaa tee xiqqoollee lubbuun jijjiirranna …
The 50th shame years of Africa Union celebration in Ireland
This week African Union (AU) celebrated its Golden Jubilee of what it calls the 50th years of achievement celebration under the headline of strengthening Pan-Africanism …
We will be broadcasting the inaugural of Jaaraa Abba Gadaa foundation and memorial service live at: http://ustre.am/YJoF – check it out! Date: Sunday May 26, …
Ergamtuun sirna dabree duraanii (OPDO) Allabaa Oromoo qabatanii bahuun dhwwaa jetti